Matiu 1, Baịbụlụ Nsọ (BN) | The Bible App
Usoro ọmụmụ Jisọs
1Ndị a bụ nna nna Jisos onye nzọpụta nwa Devidi na Eberaham. 2Eberaham mụrụ Aizik, Aịzik mụrụ Jekọb, Jekọb mụrụ Juda na ụmụnna ya. 3Juda sitere na nwụnye ya Tema mụọ Perez na Zera. Perez mụrụ Hezrọn, Hezrọn amụọ Aram. 4Aram mụrụ Aminadab, Aminadab mụrụ Nashọn, Nashọn amụọ Salmọn. 5Salmọn mụrụ Boaz site na nwụnye ya Rehaab, Boaz mụrụ Obed site na Rut nwụnye ya. Obed amụọ Jeesi. 6Jeesi mụrụ Devidi, Devidi amụọ Solomọn site na Bịasheba, onye bụ rị nwụnye Ụraya tupu Devidi alụọ ya. 7Solomọn mụrụ Rehoboam, Rehoboam amụọ Abaija, Abaija mụrụ Esa. 8Esa mụrụ Jehoshafat, Jehoshafat amụọ Joram, Joram amụọ Uzaya. 9Uzaya mụrụ Jotam, Jotam amụọ Ehaz, Ehaz amụọ Hezekaya. 10Hezekaya mụrụ Manase, Manase amụọ Emọn, Emọn amụọ Josaya. 11Mgbe e mere ka ha gaa biri nꞌala Babilọn ka Josaya mụrụ Jekonaya na ụmụnne ya. 12Mgbe ha lọtara Jekonaya mụrụ Shealitiel, Shealitiel amụọ Zerubabel. 13Zerubabel mụrụ Abiud, Abiud amụọ Eliakim, Eliakim amụọ Azoa. 14Azoa mụrụ Zadọk, Zadọk amụọ Akim, Akim amụọ Aliud. 15Aliud mụrụ Elieza, Elieza amụọ Matan, Matan amụọ Jekọb. 16Jekọb mụrụ Josef onye bụ di Meri nne Jisos onye nzọpụta. 17Ya mere, site nꞌEberaham ruo na Devidi e nwere ụgbọ iri na anọ. Ma site nꞌoge Devidi ruo mgbe e mere ka ha gaa biri nꞌala Babilọn, e nwere ọgbọ iri na anọ. Sitekwanụ nꞌoge ahụ ruo mgbe a mụrụ Jisọs bụkwa ọgbọ iri na anọ.
18Banyere ọmụmụ Jisos onye nzọpụta, Chineke mere ka Meri nne ya bụ nwagbọghọ na-amaghị nwoke dịrị ime site nꞌike Mmụọ Nsọ, mgbe otu nwoke a na-akpọ Josef na-achọ ịlụ ya. 19Ma nwoke a na-achọ ịlụ Meri bụ ezi mmadụ. Nꞌihi ya, mgbe ọ chọpụtara na Meri dị ime, o zubere ịhapụ ya na nzuzo, nꞌihi na ọ chọghị ka ndị mmadụ mata ihe bụ ọnọdụ Meri.
20Mgbe Josef nwechara mkpebi a, mmụọ ozi Onyenwe anyị bịakwutere ya na nrọ sị ya, “Josef nwa Devidi, atụla egwu ịkpọrọ Meri ka ọ bụrụ nwụnye gị, nꞌihi na nwa ahụ ọ dị ime ya sitere nꞌaka Mmụọ Nsọ. 21Ọ ga-amụkwa nwa nwoke, onye ị ga-akpọ aha ya Jisọs, nꞌihi na ọ ga-azọpụta ndị ya site na mmehie ha. 22Ọmụmụ nwa a ga-emezu ihe ahụ Chineke kwuru site nꞌọnụ onye amụma ya sị, 23‘Lee, nwagbọghọ ahụ na-amaghị nwoke ga-atụrụ ime, ọ ga-amụkwa nwa nwoke. A ga-akpọ aha ya Ịmanụelụ, nke bụ ma asụgharịa ya, Chineke nọnyeere anyị.’ ” 24Mgbe Josef si nꞌụra teta, o mere dị ka mmụọ ozi ahụ nyere ya nꞌiwu. Ọ kpọọrọ Meri ka ọ bụrụ nwụnye ya. 25Ma ha abụọ edinakọkwaghị tutuu ruo mgbe Meri mụsịrị nwa ahụ, onye Josef kpọrọ aha ya Jisọs.
Igbo Living New Testament (Baịbụlụ Nsọ )
Copyright © 1988 by Biblica, Inc.® All rights reserved worldwide.
Learn More About Baịbụlụ Nsọ